Caws Rakhi & Qalabka Burburka Mashiinka iyo Warshadda | YiZheng
Ku Caws & Burburka Xaabada waa nooc cusub oo soo saarista qalabka samaynta budada alwaax, waxay samayn kartaa caws, alwaax iyo alaabooyin kale oo ceyriin ah mar haddii lagu farsameeyo qori jajab ah, maalgashi yar, tamar yar, wax soo saar sare, faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan, fududahay in la isticmaalo dayactirka
Waa maxay Cawsku & Burburka Alwaaxda?
Ku Caws & Burburka Xaabada iyada oo ku saleysan nuugista faa'iidooyinka noocyo kale oo badan oo ah burburin iyo ku darista shaqada cusub ee jarista saxanka, waxay ka dhigeysaa adeegsiga buuxa ee mabaadi'da jajabinta iyo isku-darka tikniyoolajiyada burburka leh garaacid, jarid, isku dhac iyo shiidi
Maxaa loo isticmaalaa alwaaxa xaabada ee loo isticmaalo?
Ku Caws & Burburka Xaabada waxaa loo isticmaali karaa in lagu burburiyo bamboo, laamo, jilif, caleemo, qashin, haraaga, buunshaha bariiska, balka, qaab sameynta, cob hadhuudh, caws, cudbi, iwm, iyo sidoo kale si ballaadhan ayaa loogu adeegsadaa samaynta waraaqaha, fungus la cuni karo, dhuxusha farsamada, boodhadh, balka, guddiga cufnaanta sare, guddi fiber dhexdhexaad ah iyo wax soo saar kale oo warshadeed.
Ku Caws & Burburka Xaabada waxaa looyaqaanaa burburiye qashin duug ah oo badan oo shaqeynaya sida xajmiga alwaaxa, jajabka laamaha yar yar, burburiye dekedda laba jibaaran. Waxay isku dhafan tahay faa'iidooyinka birta birta wax lagu burburiyo iyo mashiinka wax lagu jaro. Mid ka mid ah dekedda quudinta ayaa quudisa qoryaha, dekedda kale ee quudinta ayaa quudisa laamaha, alaabada qashinka lagu shubo iyo wixii la mid ah. Waxay ka shaqeysaa alaabta ceyriinka ah oo dhexroor ka yar 250mm u dhiganta xajmiga balka ee 1-40mm.
Astaamaha Mashiinka Cawska & Burburka Qoryaha
(1) Waxay leedahay maalgashi hooseeya, isticmaalka tamarta oo hooseeya, waxsoosaar sarreeya, faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan, iyo adeegsi iyo dayactir ku habboon
(2) Shaqooyin badan Caws & Burburka Xaabada oo leh waxsoosaar wax soo saar sareeya, adeegsi fudud, dayactir ku habboon iyo kaladuwanaansho ballaaran
(3) Ku Caws & Burburka Xaabada waxaa loo isticmaali karaa mashiin ahaan taageeraya soo saarista iyo soo saarida qalabka dhaqanka fungus la cuni karo iyo diyaarinta wax soo saarka warshadaha ee warshadleyda waraaqaha, dhirta looxa, dhirta walxaha, iyo dhirta MDF.
(4) Ku Caws & Burburka Xaabada wuxuu isku daraa faa'iidooyinka mashiinka wax dumiya nooca dubbeetada iyo mashiinka wax lagu jajabiyo qoryaha mindi-disc.
(5) matoor koronto ikhtiyaari ah / mootada naaftada ah iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah;
(6) Lugaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah oo sii kordhaya oo bixiya naqshado kale oo habeysan.
Muuqaalka Muuqaalka Cawska & Burburka
Xulashada Moodalka Cawska & Qoryaha
Halbeegyada Cawska & Burburka Xaabada
Dhexroor wareega ah madaxa magaabay （mm）
Tirada jajabka wax jaraya (gogo ')
Tirada gogosha goynta (gacmaha)
Cabbirka ballaadhan ee fidsan
Xawaaraha dunmiiqa (rev / min)
Fiiro gaar ah: Awoodda mootada naaftada mobilada waxaa lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah.
Hore: Kiimikada Bacriminta Qafis Mashiinka Mashiinka
Xiga: Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad
Hordhac Waa maxay Mashiinka Turner ee lagu shubo Naafo Nooca Taayirrada? Mashiinka Gawaarida Noocyada Gawaarida Gawaarida waa qalab halsano oo muhiim u ah warshad sameynta bacriminta dabiiciga. Wareejiyaha compost ee taayirrada leh ayaa wareegi kara horay, gadaal iyo xor ah, dhammaantoodna waxaa ku shaqeeya hal qof. Giraangiraha isku-dhafan ee lugaha leh waxay ka shaqeeyaan korka cajaladda ...
Hordhac Waa maxay wiishka baaldiga loo adeegsado? Wiishka baaldilayda ayaa xamili kara waxyaabo kala duwan, sidaa darteedna waxaa loo adeegsadaa warshado iyo codsiyo badan oo kala duwan, in kastoo guud ahaan, kuma haboona qoyan, maaddooyin dheg dheg ah, ama waxyaabo adag ama u janjeera ama ...
Nooca 'Groove Type Composting Turner'
Hordhac Waa maxay Nooca Groove ee lagu shubo Bacaadinta Turner Turner? Mashiinka Turner Mashiinka Naqshadaynta ee 'Groove' waa mashiinka halsano aerobic iyo qalabka rogaya compost. Waxaa ku jira shelf jeexdin, wadada socodka, aaladda aruurinta awooda, qayb wareejinta iyo qalabka wareejinta (inta badan loo isticmaalo shaqooyinka taangiyada badan). Shaqada porti ...
Hordhac Waa maxay Dhuxusha Dhuxusha ka go'day? Dhuxulaha Dhuxul Dhawaqa ah wuxuu ku habboon yahay kuleyliyaha foornooyinka kala-qabashada ee kala duwan, foornooyinka qaraxa kulul, foornooyinka wareega, saxanka foornada qolofka qoyaanka, foornooyinka dhalaalaya, foornooyinka la tuurayo iyo foornooyinka kale ee kululaynta. Waa shey ku habboon tamarta keydinta iyo ilaalinta deegaanka ...
Hordhac Waa maxay Semi-qoyan Qalabka Mashiinka? Mashiinka Mashiinka Nadiifinta Semi-wet-ka ah waa qalab burburin xirfadle ah oo loogu talagalay maaddo leh huurka badan iyo fiyuus badan. Mashiinka Burburka Bacriminta Qoyaanka Sare wuxuu qaataa rotors-yada laba-heer ah, taas oo macnaheedu yahay inay kor iyo hoos u burburinayso laba-marxaladood. Marka alaabta ceyriinka ay fe ...